Boris Johnson: Midowga Yurub kama codsan doono muddo kororsi ku saabsan Brixit-ka | Somsoon
Home WARAR Boris Johnson: Midowga Yurub kama codsan doono muddo kororsi ku saabsan Brixit-ka
Boris Johnson waxa uu sheegay inuu shaaca ka qaadi doono qorshahiisa ku aaddan ka bixitaanka Britain ee Midowga Yurub inkastoo xildhibaanada ay taageereen mabda’a ah in dib loo dhigo xilliga ay Britain ka baxayso Midowga Yurub.
Waxa uu wacad ku maray inuu toddobaadka soo socdo baarlamaanka hor keeni doono sharciyo lagu meel marinayo heshiiskiiska Brexit-ka.
Balse waxa uu Midowga Yurub weydiisan doonaa muddo kororsi ku aaddan xilligii UK loo asteeyay inay ka baxdo Midowga Yurub ka dib markii baarlamaanka ay taageereen mooshin loogu talagalay inay Britain Midowga Yurub ka baxdo heshiis la’aan.
Xildhibaanada ayaa sidoo kale Isniinta u codeyn doono mooshin kale oo ku saabsan ka bixitaanka Britain ee Midowga Yurub.
Taageeridda Xildhibaanada ayaa dhabar jab weyn ku ah ra’sal-wasaare Boris Johnson, kaasi oo marar badan ku cel-celiyay in UK ay Midowga Yurub ka baxayso iyada oo aysan dhicin wax heshiis ah.
Xildhibaanada ayaa bishii la soo dhaafay sheegay inay ka hortagi doonaan in Britain ay Midowga Yurub ka baxdo heshiis la’aan.
Mr Johnson ayaa sheegay in uusan ka argagixin dharbaaxdii ka soo gaartay baarlamaanka uuna ku hawlan yahay in sidii ay Britain dhamaadka bishan uga bixi lahayd Midowga Yurub isaga oo ku saleynayo qorshayaashiisa Breit-ka.
Balse hogamiyaha xisbiga Labour-ka Jeremy Corbyn ayaa yiri: ” Waa in ra’sal-wasaaraha uu haatan sharciga u hogaansamaa. Waa in uusan ku sii hanjabin in Britain uu Midwoga Yurub ka saarayo heshiis la’aan isagoo xubnaha baarlamaanka ku beer-jilicsanaya oo rabo inay taageeraan qorshiisa Brexit-ka.”
Article horeYuusuf Garaad: “Majirto xilli ay uga liidato Soomaaliya waqtiga lagu balamay dhageysiga Kiiska badda”
Article socoda Muuse Biixi oo guddi wasiirro ah u magacaabay xalinta khilaaf ka taagan…